sarcoidosis နှင့်အတူ Living ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကိုသငျသညျခွင့်ရှိသည်စေခြင်းငှါငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏အကျိုးကျေးဇူးနဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအကွာအဝေးပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ ဤရွေ့ကားအကျိုးကျေးဇူးများကိုအလုပ်လုပ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ sarcoidosis မှပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာအထူးသဖြင့်လျှင်, သင့်ကိုယ်သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ကူညီနိုင်ဘူး။ ကံမကောင်းစွာ SarcoidosisUK ကိုထောကျပံ့တစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ထောက်ခံအားပေးမှုဝန်ဆောင်မှုမဆိုစိတ်ကြိုက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်နိုင်ကြဘူး။ နောက်ထပ်ထောက်ခံမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်အဘို့အောက်ကလင့်ခ်ကိုအသုံးပြုဖို့ပါ - သူတို့ကလမျးညှနျခ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်ကြသည်။
နောက်ထပ်စာမျက်နှာကိုဆင်းအသေးစိတ်ပြီးတော့အဲဒီမှာခေတ္တအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်စဉ်းစားရန်လေး key ကိုအကျိုးခံစားခွင့်, ဖြစ်ကြပြီး။ ဒါဟာသင်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းရဲ့အဆုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုကိုသုံးပါနှင့်လျှောက်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံထွက်ရှာရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ဟုဆိုကာလူတွေကိုကူညီပေးဖို့အများကြီးအသုံးဝင်အရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်, သင်ညာဘက် box ထဲမှာနှင့်ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များ၏အချို့မှလင့်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ရေးနေ့ငွေပေးချေ (PIP) ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
သူတို့ကိုရေရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းရှိခြင်း၏အပိုကုန်ကျစရိတ်များဖြည့်ဆည်းကူညီပေးဖို့ 64 - လူများအတွက် 16 အသက်။
ချီးမြှင့်လျှင်, နေ့စဉ်လူနေမှုအစိတ်အပိုင်းနှင့်တစ်ဦး mobility အစိတ်အပိုင်းလည်းမရှိ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှစ်ခုနှုန်းထားများရှိပါတယ်; စံနှင့်မြှင့်တင်ရန်။
ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ငွေစု, မ taxable ကြောင့်ထိခိုက်နှင့်သင်အလုပ်အတွက်သို့မဟုတ်မရှိမရှိကြောင့်ရနိုင်မရ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလွတ်လပ်ရေးနေ့ငွေပေးချေမှုရမည့်ဟုဆိုကာ PIP လျှောက်ထား၏လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမျးညှနျနိုငျသညျ။
အလုပ်အကိုင်နှင့်ပံ့ပိုးမှုခွင့်ပြုပါ (ESA) ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုလုပ်သင့်မိသားစုဆရာဝန်ကနေဆေးဝါးကုသမှုလက်မှတ် ( 'မထိုက်မတန်မှတ်စု') လိုအပ်သည်။
တက်ရောက်သူ Allow (AA ကို) ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
သင်ရှိသည်ဆိုင်ငွေသို့မဟုတ်ငွေစုခြင်းဖြင့်မထိခိုက်; (မသန်စွမ်းသူများနေထိုင်မှုကိုခွင့်ပြုသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ငွေချေမှု မှလွဲ. ) အခြားမည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူပေးဆောင်။ သငျသညျအမျိုးသားရေးအာမခံပံ့ပိုးမှုများကိုပေးဆောင်ကြရန်မလိုပါ။
တက်ရောက်ခွင့်ပြုရန်ဟုဆိုကာ (AA ကို) အတွက်လျှောက်ထား၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကနျြးမာရေးအခွအေနေတစ်ခုသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းရှိသည်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု / ကြီးကြပ်မှုနှင့်အတူကူညီသို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိမ်ပြင်န်းကျင်ရတဲ့နှင့်အတူအကူအညီလိုသူကို 16 နှစ်အောက်သားသမီးတို့အဘို့။
Crohn ရဲ့သို့မဟုတ် Colitis (ဥပမာပိုမိုမြင့်မားအပူဥပဒေကြမ်းများ, အထူးအစားအစာ, တက္ကစီကိုပုံမှန်အတိုင်း, etc) ဖြင့်ကလေးတစ်ဦးရှိခြင်း၏အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်တွေ့ဆုံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
DLA ဟုဆိုကာ - 16 နှစ်အောက်ကလေးများ မိဘများ DLA လျှောက်ထား၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
တချို့ကအရွယ်ရောက်သူတို့ဇွန်လ 10, 2013 မတိုင်မှီအခိုင်အမာရှိလျှင်လည်းနေဆဲ DLA လာပြီစေခြင်းငှါပေမယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလွတ်လပ်ရေးနေ့ငွေပေးချေ (PIP) ဆိုကြသည်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်မည်သည့်အခါထွက်ရှာရန်, PIP စစ်ကိုသုံးပါ: www.gov.uk/pip-checker
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်စနစ်ကရှုပ်ထွေးသည်နှင့်မကြာခဏပြောင်းလဲစေပါသည်။ အစိုးရ၏ Gov.uk က်ဘ်ဆိုဒ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်: www.gov.uk/browse/benefits
သငျသညျ (နှင့်သင့်မိသားစု) အကျိုးအဘယ်အရာကိုရှာဖွေခွင့်ရှိသည်စေခြင်းငှါ, သင်အမည်မသိအကဲဖြတ်ဖြည့်စွက်နိုင်သည် www.gov.uk/benefits-adviser
သငျသညျမသန်စွမ်းနေမယ်ဆိုရင်အလုပ်မှာအကူအညီရယူပါတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (Work ကိုမှ Access ကို) ရှိသည်: https://www.gov.uk/access-to-work
အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထောက်ပံ့ရေး Facebook မှာ Group မှ: ESA DLA / PIP အင်ဖို / ပံ့ပိုးမှု (တရားဝင် Group မှ) ။
အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အထွေထွေထောက်ပံ့ Facebook မှာ Group မှ: 4UP.
ဗြိတိန်အစိုးရ Calculator ကိုကျေးဇူးပြုတတ်၏။
အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်လုပ်ငန်းခွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာစောင်များ (Paid Subscription) ။
နိုင်ငံသားများအကွံဉာဏျဗျူရို: DWP အကျိုးကျေးဇူးများဆုံးဖြတ်ချက်များဆွဲဆောင်။
8 ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ - ထိုအကျိုးကျေးဇူးများစနစ်သွားခြင်း
ဤရွေ့ကား 8 ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များဗြိတိန်အကျိုးကျေးဇူးများကို system ကိုသွားလာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုစီမံခန့်ခွဲစေသင့်ပါတယ်:
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်စနစ်ကရှုပ်ထွေးသည်နှင့်မကြာခဏပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကို up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် Check: www.gov.uk/browse/benefits.
သင်နှင့်အတူဆက်ဆံပါလိမ့်မည်, လူများ sarcoidosis အကြောင်းကိုဘာမှသိရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပေးပါ။ သင်သည်သင်၏အခြေအနေပေါ်တွင်သူတို့ကိုပညာပေးနှင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအစည်းအဝေးဖွစျလိမျ့မညျလူ sarcoidosis အပေါ်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် (အောက်တွင်ဥပမာသည့်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပင်စင်အဘို့အဦးစီးဌာန (DWP) စာရွက်စာတမ်း) ကိုဖတ်ပါ။
သငျသညျမသန်စွမ်းသူများနေထိုင်မှုကိုခွင့်ပြု (DLA) နှင့်တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါ (AA ကို) အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်သူကို DWP န်ထမ်းများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုအသုံးဝင်သောရှာတွေ့နိုင်ပါသည်: AZ အရွယ်ရောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ (Sarcoidosis စာမကျြနှာ 541-543 အပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ )
ကိုပြင်ဆင်ရမည် - အရေးအသားအတွက် diagnoses အပါအဝင်သင့်ရဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ရှိသည်။ သငျသညျစည်းရုံးဖို့လိုနှင့်အရာခပ်သိမ်း evidenced ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေမည်။ သင့်အမှုပြင်းထန်လျှင်ဥပမာ, စာတစ်စောင်အတွက်စကားလုံး '' အကြီးအကျယ် '' အသုံးပြုရန်သင်၏အတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်မေးကြည့်ပါ။
စာအရေးအသားတွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်အားလုံးစာပေးစာယူကိုအတည်ပြု (နှင့်မိတ္တူစောင့်ရှောက်) ။ တစ်ခုခုကဆိုပါတယ်သို့မဟုတ်သဘောတူညီခဲ့နှင့်အဲဒါကိုအဖြစ်ကောင်းစွာမတည်ရှိစေခြင်းငှါ, ရေးသားခြင်း၌မပါ! ပြီဆိုရင် သင်ဖုန်းပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်အစည်းအဝေး / အင်တာဗျူးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုပြောသည်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူကအတည်ပြုမှသူတို့ကိုရေးပါ။ ဒါဟာကျည်ဆံအချက်များသုံးစွဲဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရေးဖို့ဘာမှနောက်ပိုင်းတွင်သင်၏တိုင်ကြားမှု၏တရားဝင်မှုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်အသုံးပြုစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
သင်သည်လည်းမမှန်သို့မဟုတ်ခံစားနေရအထူးသဖြင့်လျှင်, အသငျသညျအကြိုးခံစားခှငျ့လျှောက်ထားစဉ်အတွက်ထောက်ခံမှုရှာအံ့သောငှါအာမခံပါသည်။ ဒါကဆွေမျိုးသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်, လူမှုရေးန်ဆောင်မှုများ, သင့်မိသားစုဆရာဝန်ရဲ့ခွဲစိတ်သို့မဟုတ်သင့်ဒေသခံနိုင်ငံသားများအကြံဉာဏ်ဗျူရိုကနေပါလိမ့်မယ်: www.citizensadvice.org.uk/
သငျသညျပြဌာန်းအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်သူတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ သငျသညျ sarcoidosis မလိုချင်ခဲ့သလဲ, အကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေကြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစနစ်အားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ်လွဲမှားစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့ခံရဖို့ခွင့်ပြုမထားပါနဲ့။ လူတိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေး Be, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုငါတို့သိကြ၏။
ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းအကျိုးကျေးဇူးများ၏အချို့နည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း, အချို့ပံ့ပိုးမှုများကို-based ဖြစ်ကြသည်။ ဆိုလိုတယ်-စမ်းသပ်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ပြီးသားတောင်းဆိုစေခြင်းငှါအချို့ရွေးချယ်ထားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအပါအဝင်, သင့်ဝင်ငွေသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ သင်ပိုမိုဝင်ငွေအဖြစ်သင့်ငွေပေးချေမှုတဖြည်းဖြည်းလျော့ချပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အဘို့အပံ့ပိုးမှုများ-based အကျိုးကျေးဇူးများကိုအမျိုးသားအာမခံပံ့ပိုးမှုများကို၏နိမ့်ဆုံးပမာဏကိုလိုအပ်သည်။
အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ: ကျန်းမာရေး, မသန်စွမ်းသူများနှင့် Mobility ကိုဆက်စပ်ပံ့ပိုးမှု
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ရေးနေ့ငွေပေးချေ (PIP) အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူဖြစ်သောကြောင့်ရေရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းတို့သည်ရှိစေခြင်းငှါအပိုကုန်ကျစရိတ်အချို့ကိုဖြည့်ဆည်းကူညီပေးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။
PIP Non-နည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်ပြီးနှင့် Non-contributory ဖြစ်ပြီး, သငျသညျအလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်ရှိမရှိပေးဆောင်စေနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဗြိတိန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ပေးပါ။
ပြီးခဲ့သည့်3နှစ်အနည်းဆုံး2ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်ကြသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်လောလောဆယ်နေထိုင်သူတစ်ဦး, အိုင်ယာလန်, က Man သို့မဟုတ် Channel ကိုကျွန်းများ၏ကျွန်း။
နေ့စဉ်နေထိုင်မှုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် Mobility ကိုလှုပ်ရှားမှုများ - PIP နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်။ သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်သင့်ရထိုက်ခွင့်ပေါ် မူတည်. နှစ်ဦးစလုံးအစိတ်အပိုင်းများများအတွက်ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။
တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စံများနှင့်အဆင့်မြင့်နှစ်ခုနှုန်းထားများ, ရှိပါတယ်။ သင်အဘို့အအရည်အချင်းပြည့်မီဘယ်လောက်ရှိသလဲထားတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချက်တွေကို system ပေါ်တွင်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ စံနှုန်းသည်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင့်အားရှစ်မှတ်ထားဖို့လို, နှင့်တိုးမြှင့်မှုနှုန်းအဘို့အသငျသညျ 12 မှတ်ထားဖို့လိုပါမယ်။
သင့်ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီအကဲဖြတ်ရန်သင်တစ်ဦးလွတ်လပ်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နေဖြင့်တစ်ဦးအကဲဖြတ်ခံယူရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကဲဖြတ်သည်သင့်အဆိုးဆုံးရက်ခံစားမိပုံကိုစဉ်းစားရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကဲဖြတ်ပိုပြီးတိကျစွာလိုအပ်မည်အကြောင်းဘယ်လောက်ထောက်ခံမှုဆုံးဖြတ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သင် mobility လှုပ်ရှားမှုများအစိတ်အပိုင်းများ၏တိုးမြှင့်မှုနှုန်းချီးမြှင့်ပါတယ်လျှင်သင်သည်လည်း Motability အစီအစဉ်သို့မဟုတ်အပြာရောင်တံဆိပ်ကိုအစီအစဉ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်ဤအစီအစဉ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်ထပ်မံအကဲဖြတ်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
PIP တောင်းဆိုမှုများသာန်းကျင်မှာ 45% အောင်မြင်သောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုပယ်ချထားသည်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ကူညီရန်သတင်းအချက်အလက်များသည်။ အတော်များများကအနုတ်လက္ခဏာဆုံးဖြတ်ချက်များအယူခံအပေါ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။ နှစ်သက်ဖွယ်လြှငျ, အရေးအသား၌ရှိသမျှကိုမိတ္တူတိုနှင့်၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်မချအတွက် DWP အသုံးပြုသောအားလုံးစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူတောင်းဆိုရန်မှတ်မိဖို့သေချာပါစေ။ ဂရုတစိုက်, သူတို့ကဆိုပါတယ်အရာကိုကိုဖတ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချသုံးစာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်, သင်သည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းအဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့အယူခံဝင်ရှင်းလင်းစွာဤသို့ဖော်ပြသည်ကြောင်းသေချာစေရန်
သင့်ရဲ့အယူခံကိုပယ်ချသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ချက်မျှတဖြစ်ယုံကြည်ပါက, သင်မှတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ် ပါလီမန်နှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု Ombudsman.
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် PIP: www.gov.uk/pip/overview
ဟုဆိုကာ PIP: www.gov.uk/pip/how-to-claim
(မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဗြိတိန်) ဟုဆိုကာမှ PIP လမ်းညွှန်: https://www.disabilityrightsuk.org/personal-independence-payment-pip
နယူးပြောဆိုချက်ကိုတယ်လီဖုန်း: 0800 917 2222
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြောဆိုချက်ကိုတယ်လီဖုန်း: 0345 850 3322
text-ဖုန်းကို: 0345 601 6677
အရေးကြီး: 2013 ခုနှစ်ဧပြီလကနေစပြီး, အ DLA ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလွတ်လပ်ရေးနေ့ငွေချေမှု (PIP) ဖြင့်အစားထိုးလျက်ရှိသည်။ အားလုံးအသစ်ကယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေယခု PIP လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
16 64 မှအသက်အရွယ်ရောက်သည်။
DLA လက်ခံရရှိအတွက်ပြီးသားနေသောပြည်သူ့ PIP လျှောက်ထားရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ ထွက်ရှာတွေ့မှပို PIP စစ်ကိုသုံးပါ။ (www.gov.uk/pip-checker)
PIP များအတွက်လက်ရှိအချိန်တွင် DLA များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောသူအချို့လူများကပါလိမ့်မယ်မဟုတ်အရည်အသွေး, နှင့် DLA များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူးသူအချို့ PIP များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါလိမ့်မည်
Sarcoidosis ခဲကလေးများအတွက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်သင်တစ်ဦးနာမကျန်းသို့မဟုတ်မသန်မစွမ်း၏ရလဒ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ် mobility စံကျေနပ်သူကို 16 နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦးစောင့်ရှောက်လျှင်, သင် DLA တောင်းဆိုခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကလေးသည်မည်သည့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများမရှိဘဲတူညီသောအသက်ကလေးတစ်ဦးထက်သိသိသာသာပိုပြီးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်ပြသရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးစောင့်ရှောက် Element ကိုနှင့် Mobility ကို Element ကို: DLA နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်။ မိုဘိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့သင့်ကလေးသုံးယောက်သို့မဟုတ်အထက်ဖြစ်ရပါမည်။
DLA ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: www.gov.uk/disability-living-allowance-children
တယ်လီဖုန်း: 0345 712 3456
သငျသညျ 16-64 ဖြစ်ကြပြီးအလုပ်လက်မဲ့ဒါမှမဟုတ် 16 နာရီတစ်ပတ်အောက်မှာအလုပ်လုပ်လျှင်သင်အလုပ်အကိုင်နှင့်ပံ့ပိုးမှုခွင့်ပြုပါ (ESA) တောင်းဆိုခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ESA သငျသညျအလုပျအတှကျသို့မဟုတ်သင့်အခွအေနေ၏ရလဒ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းလျှင်ရှာဖွေနေကြသောအခါငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ESA နည်းလမ်းများစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အမျိုးသားအာမခံပံ့ပိုးမှုများကိုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်အရာ Contributory ESA ။
အဆိုပါနည်းလမ်း-စမ်းသပ်ပြီးဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သင့်ဝင်ငွေနှင့်ငွေစုအပေါ်မူတည်ထားတဲ့ဝင်ငွေခွန်-related ESA ။
ESA လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာသင်ရထိုက်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးမည့်လုပ်ငန်း Capability အကဲဖြတ်တက်ရောက်ရန်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကဲဖြတ်စဉ်အတွင်းသင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါပျမ်းမျှတစ်ပတ်အလုပ်လုပ်ရတယ်လျှင်သင်ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အခက်အခဲများနှင့်ကန့်သတ်ဖျောပွနိုငျဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အလုပ်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကို - သင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတစ်ခုအကြံပေးနှင့်အတူပုံမှန်အင်တာဗျူးရှိသည်ဖို့ကြိုးစားရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။
ပံ့ပိုးမှုအုပ်စုတစ်စု - သင်သည်သင်၏နာမကျန်းသို့မဟုတ်မသန်မစွမ်းအလုပ်လုပ်ရန်သင့်ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ်တစ်ဦးပြင်းထန်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဖြစ်အလုပ်အကိုင်အဘို့အကြည့်အရှုသွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျ ESA များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမဟုတ်လျှင်, သင်မယ့်အစားယောဘသည်-ရှာဖွေသူများ Allow (JSA) သို့မဟုတ်က Universal ချေးငွေလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်။
ESA ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: www.gov.uk/employment-support-allowance/overview
တစ်ဦးအရေးဆိုမှု (ငါ့အဘို့အရေးယူမှု) အောင်ဖို့ကိုလမ်းညွှန်: https://www.actionforme.org.uk/uploads/pdfs/esa-an-overview-factsheet.pdf
တယ်လီဖုန်း: 0800 055 6688
ဝလေဝဘာသာစကား: 0800 012 1888
တယ်လီဖုန်း: 0345 608 8545
ဝလေဝဘာသာစကား: 0800 600 318
တက်ရောက်သူ Allow (AA ကို)
တက်ရောက်သူ Allow non-နည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်ပြီး 65 အသက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်ရှိသည်သောသူကျော်လူတွေကို paid Non-contributory အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတက်ရောက်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားဖို့ကအနည်းဆုံးခြောက်လစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်ခဲ့ကြရပေမည်။
ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ခုမှာ paid ရဲ့ နှုန်းထားများ နှင့်ရသောနှုန်းမှာသငျသညျအရငျသညျဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့မသန်စွမ်း၏လိုအပျကွောငျးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆိုပါခွင့်ပြုသငျသညျအသကျရှငျဘယ်မှာသင့်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်မဟုတျဘဲအိမ်အပြင်ဘက်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ် mobility ထောက်ခံမှုများအတွက်အထောက်အကူပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
တက်ရောက်သူ Allow (AA ကို) ကိုကျော်-65s များအတွက် DLA / PIP နှင့်ညီမျှသည်။
AA ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: www.gov.uk/attendance-allowance
AA ကို Factsheet: www.disabilityrightsuk.org/attendance-allowance-aa
တယ်လီဖုန်း: 0345 605 6055
အဆိုပါအပြာရောင်တံဆိပ်အစီအစဉ်ကိုသင်မသန်စွမ်းယာဉ်ရပ်နား bays အတွက်ရပ်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဘယ်မှာရပ်နားအာကာသများအတွက်လျှောက်ထားရန်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Motability အစီအစဉ်အဆင်ပြေအောင်ကားများနှင့်ဆိုင်ကယ်အဘို့အတတ်နိုင်ငှားရမ်းခွင့်ပေးပါသည်။
လန်ဒန်များအတွက်ပို့ဆောင်ရေး "ငါ့ကိုတစ်ဦးထိုင်ခုံပူဇော် ကျေးဇူးပြု. " ဟုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ဝတ်ဆင်ခံရဖို့တစ်တံဆိပ်မိတ်ဆက်ပါပြီ။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော sarcoidosis အဖြစ်လျော့နည်းမြင်နိုင်မသန်စွမ်းသူလူတို့အဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အပြာရောင်တံဆိပ်ကို Apply: www.gov.uk/apply-blue-badge
အပြာရောင်တံဆိပ်အစီအစဉ်တိုင်ကြားမှု: 0844 463 0215 ။
Motability အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်: www.motability.co.uk
Motability အစီအစဉ်တယ်လီဖုန်း: 0300 456 4566
Motability အစီအစဉ် Factsheet: www.disabilityrightsuk.org/motability-scheme
ပြဌာန်းချက်နာမကျန်း Pay ကို
သငျသညျအလုပျခနျ့နေတယ်ဆိုရင်, Statutory နာမကျန်း Pay ကို (ssp) သင်အလုပ်လုပ်လွန်းနေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါအထိ 28 ရက်သတ္တပတ်အဘို့သင့်အလုပ်ရှင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုမှပေးဆောင်လိမ့်မည်။
သင်သည်သူတို့၏လျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်ရှာရန်သင့်အလုပ်ရှင်ဆက်သွယ်ပါရန်လိုအပ်မည်။ တချို့ကအလုပ်ရှင်များကိုအလိုအလျောက် ssp ပေးဆောင်ရမည်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေကတောင်းဆိုဖို့စာတစ်စောင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ssp အဆုံးသတ်ပြီးတာနဲ့သင်ဆဲအလုပ်ပြန်သွားဖို့လည်းနေမကောင်းနေလျှင်, သငျသညျအလုပ်အကိုင်နှင့်ပံ့ပိုးမှုခွင့်ပြုဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်။
အလုပ်ရှာသူများရဲ့ Allow (JSA)
သင်အလုပ်ရှာနေစဉ်သင်ကူညီပေးဖို့အလုပ်ရှာသူများရဲ့ Allow (JSA) အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျကောင်းသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအလုပ်ရှာနေကိုရပ်တန့်ပါကသင်၏ငွေပေးချေမှုရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။ JSA နည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီဖုန်း: 0800 055 66 88
universal ခရက်ဒစ် (ဝင်ငွေ-related အကျိုးကျေးဇူးများမသန်စွမ်းအကြိုးခံစားခှငျ့, စောင့်ရှောက်သူအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့အခွန်ချေးငွေအပါအဝင်) တစျဦးငွေပေးချေမှုအတွင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးပေါင်းစပ်ထားတဲ့သစ်တစ်ခုအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိသင်သည်အသက်ရှင်ဘယ်မှာပေါ်မူတည်ဒါကြောင့်အဆင့်ဆင့်အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးမိတ်ဆက်နေပါသည်။ သငျသညျအရလိမ့်မယ်ပမာဏကိုသင့်ရဲ့အခွအေနနှင့်သင်တို့အဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံမှုများ၏ဒေသများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာလစဉ်ပေးဆောင်နှင့်သင်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်ရှိမရှိအရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်။
Universal ခရက်ဒစ်အတွင်းထောက်ခံမှုများ၏ဒေသများအိုးအိမ်, ကလေးထိန်း, မသန်စွမ်းနှင့်မသန်စွမ်းမှုနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအဘို့အဂရုစိုက်တတ်တဲ့ပါဝင်သည်။
တယ်လီဖုန်း: 0345 600 0723
သင်သိသိသာသာဂရုစိုက်တတ်တဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အတူအနည်းဆုံး 35 နာရီ 16 ကျော်ကတစ်စုံတစ်ဦးကိုအသက်အဘို့အတစ်ပါတ်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဖြုန်းလျှင်စောင့်ရှောက်သူများရဲ့ Allow တောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့ဂရုစိုက်လူတစ်ဦးနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းရှိလော့။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ရေးငွေပေးချေ (PIP) နေ့စဉ်လူနေမှုအစိတ်အပိုင်း
တစ်ခုစက်မှုဒဏ်ရာ Disabled အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူပုံမှန်အမြင့်ဆုံးနှုန်းမှာသို့မဟုတ်အထက် constant တက်ရောက်ခွင့်ပြု
တစ်ဦးစစ်ပွဲ Disabled ပင်စင်နှင့်အတူအခြေခံ (အပြည့်အဝနေ့က) နှုန်းစဉ်ဆက်မပြတ်တက်ရောက်ခွင့်ပြု
သငျသညျနိုင်ငံတော်ပင်စင်ခံယူ အကယ်. စောင့်ရှောက်သူများရဲ့ခွင့်ပြုလျှောက်ထားမီ, နှစ်ခုအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပေးဆောင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်အထူးကုအကြံဉာဏ်ကိုရယူပါ။
အုပ်ထိန်းရဲ့ Allow ကို non-contributory ဖြစ်ပါတယ် Non-နည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ သင်တို့မူကားမရကြဘူးဆိုအခြားနည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်စောင့်ရှောက်သူများရဲ့ခွင့်ပြုရာမှရတူညီသောပမာဏကိုလျှော့ချပါလိမ့်မည်။
တယ်လီဖုန်း: 0845 6084321
သငျသညျစောင့်ရှောက်သူများရဲ့ခွင့်ပြုဘို့အရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးဆိုရငျ, သင်သည်အနည်းဆုံး 20 နာရီတစ်ပတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လျှင်စောင့်ရှောက်သူများရဲ့ချေးငွေရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျပြီးသားစောင့်ရှောက်သူများရဲ့ Allow ဟုဆိုကာနေလျှင်သင်တောင်းဆိုလို့မရပါဘူး။
မသန်စွမ်းနေထိုင်မှုကိုခွင့်ပြု (DLA) အလယ်သို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးနှုန်းအစိတ်အပိုင်းဂရုမစိုက်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ရေးနေ့ငွေပေးချေ (PIP) ကိုစံသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မှုနှုန်းမှာနေ့စဉ်လူနေမှုအစိတ်အပိုင်း,
အုပ်ထိန်းရဲ့ခရက်ဒစ်နည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်ပြီးဒီတော့သင့်ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ငွေစုကြောင့်ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျကြောင့်သင့်ရဲ့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့တာဝန်များမှအလုပ်ရပ်တန့်ရန်ရှိပါက, သင်အမျိုးသားအာမခံပံ့ပိုးမှုများကိုနေဆဲပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်အုပ်ထိန်းရဲ့ခရက်ဒစ်အမျိုးသားအာမခံအကြွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသင်ပြည်နယ်ပင်စင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲဂရုစိုက်တတ်တဲ့တာဝန်များအပေါ်ယူနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။
တယ်လီဖုန်း: 0345 608 4321
ညွှန်းများမှကုန်ကျစရိတ်များ (သာလျှင်အင်္ဂလန်) နဲ့ကိုကူညီပါ
သငျသညျအင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်ပါကသင်သည်ဆေးညွှန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအကူအညီတောင်းလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်။ NHS ဆေးညွှန်းစွဲချက်စကော့တလန်, ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်အတွက်ဖျက်သိမ်းပြီ။ အင်္ဂလန်အတွက် 16 နှစ်အောက်, ဒါမှမဟုတ် 19 နှစ်အောက်နှင့်အပြည့်အဝအချိန်ပညာရေး, ဒါမှမဟုတ် 60 ကျော်နေသောကြောင့်လူအလိုအလြောကျအခမဲ့ဆေးညွှန်းခွင့်ရှိပါတယ်။
ဆေးညွှန်းကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းလက်မှတ် (PPC) ။
တစ်ဦးကဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသင်လျှင်အခမဲ့ဆေးညွှန်းအရငျသညျကို enable ဖြစ်နိုင်သည်:
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သော 12 လအတွင်းကလေးခဲ့ကြ
အနိမျ့ဝင်ငွေခွန်အစီအစဉ်အခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့ချဆေးညွှန်းကုန်ကျစရိတ်ရဖို့သင်သည်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအနိမ့်ဝင်ငွေရှိသည်နှင့်သင့်ရဲ့မြို့တော်£ 16,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းလျှင်သင်တို့ကိုအနိမျ့ဝင်ငွေခွန်အစီအစဉ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေနိုင်သည်။ သင်တစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုအိမ်မှာလျှင်သင့်ရဲ့မြို့တော်စရိတ်£ 23.250 အထိမြင့်တက်။
သငျသညျအနိမျ့ဝင်ငွေခွန်အစီအစဉ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပါက, သင်သည်လည်းသွားစရိတ်များ, မျက်စိစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခရီးသွားလာစရိတ်နှင့် wigs နှင့်ထည်အပါအဝင်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူထောက်ခံမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်ကုန်ကျစရိတ်ထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါညွှန်းကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းလက်မှတ်ကိုသင်အနိမျ့ဝင်ငွေခွန်အစီအစဉ်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်လက်မှတ်ရထိုက်ခွင့်မရလျှင်ဆေးညွှန်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့သငျသညျနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသုံးလတာကာလအတွက်သို့မဟုတ်သင်တစ်နှစ်လောက်အတွင်း 12 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပစ္စည်းများလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လေးယောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပစ္စည်းများလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဆေးကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းလက်မှတ်ဝယ်ယူဆေးညွှန်းကုန်ကျစရိတ်ပေါ်တွင်သင်ပိုက်ဆံကယ်တင်မည်။
အထွေထွေမေးမြန်းမှုအနိမျ့ဝင်ငွေခွန်အစီအစဉ်တယ်လီဖုန်း: 0300 330 1343
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းလက်မှတ်တယ်လီဖုန်း: 0300 330 1341
ဝင်ငွေခွန် & အခွန်ဆက်စပ်ဘဏ္ဍာရေးပံ့ပိုးမှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ကအချို့သောအဆင့်အောက်ကျလျှင်ဝင်ငွေခွန်ထောက်ခံမှုသင့်ဝင်ငွေတက်ထိပ်ဆုံးမှ။ ဤသည်အကျိုးအတွက်နည်းလမ်းစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပြီး, သင်ကမိတ်ဖက်ရှိပါက, သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့အလုပ်လုပ်နာရီ, ဝင်ငွေနှင့်ငွေစုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဝင်ငွေခွန်ထောက်ခံမှုကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းထားများမှာကအခပေးဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်နှုန်းကိုသင်ကလေးဟုတ်မဟုတ်, သင့်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ကွဲပြားခြားနား, သင်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်စုံတွဲတစ်တွဲ၌ရှိကြ၏ရှိမရှိပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူမျှမဝင်ငွေတစ်ခုသို့မဟုတ်အနိမ့်ဝင်ငွေနှင့်ငွေစုအတွက်ထက်ပိုမ£ 16,000 ရှိသည်။
(သင့်မိတ်ဖက် 24 နာရီတစ်ပတ်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်) ထက်နည်း 16 နာရီတစ်ပတ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
(မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်ပါ) အင်္ဂလန်, စကော့တလန်သို့မဟုတ်ဝေလနယ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။
သငျသညျအလုပ်ရှာသူများရဲ့ Allow သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်နှင့်ထောက်ပံ့ခွင့်ပြုရန်ဟုဆိုကာနေကြသည်လျှင်သင်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုတောင်းဆိုခွင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကလေးသူငယ်အခွန်ခရက်ဒစ် - ဆိုကလေးတွေရှိပါတယ်သူမည်သူမဆိုမှပေးဆောင်, အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေပေါ် မူတည်. ။ သငျသညျကလေးအခွန်ခရက်ဒစ်တောင်းဆိုဖို့လုပ်ဆောင်နေခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အနိမ့်-paid အလုပ်အတွက်လူတို့အားပေးဆောင် - အခွန်ခရက်ဒစ်အလုပ်လုပ်။ သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့ကအနည်းဆုံး 16 နာရီတစ်ပါတ် (25-59 တစ်နှစ်ကြားရှိ 30 နာရီ) အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်အသုံးချသို့မဟုတ် Self-အလုပ်ရှိမရှိလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျအခှနျခရက်ဒစ်က Universal ခရက်ဒစ်ပေးချေမှုအတွင်းဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာအခွန်ချေးငွေနှင့် Universal ချေးငွေမတောင်းဆိုလို့မရပါဘူး။
ပင်စင်ခရက်ဒစ်အဆိုပါခြေစစ်ပွဲအသက်အရွယ်ရောက်ရှိကြသူလူတို့အဘို့နည်းလမ်း-စမ်းသပ်ပြီးအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခြေစစ်ပွဲအသက်အရွယ်တဖြည်းဖြည်းပြည်နယ်ပင်စင်အသက်အရွယ်တို့၏စီးပွါးနှင့်အညီမှ 66 တိုးပွားလာနေသည်။
ခရက်ဒစ်အာမခံ - ဤနိမ့်ဆုံးအာမခံအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်အပတ်စဉ်ဝင်ငွေတက်ထိပ်ဆုံးမှ။
ချွေတာသုံးစွဲခရက်ဒစ် - အရည်အချင်းပြည့်မီယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေသူတို့ရဲ့အငြိမ်းစားဆီသို့ဦးတည်အချို့ပိုက်ဆံကယ်တင်ပြီပါလိမ့်မယ်။
တယ်လီဖုန်း: 0800 99 1234
နိုင်ငံတော်ပင်စင်သင်ဧပြီ 2016 ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပြီးနောက်ပြည်နယ်ပင်စင်အသက်အရွယ်ရောက်ရှိလျှင်ဒီအကျိုးကျေးဇူးပံ့ပိုးမှုများကို-based သည်နှင့်သင်အများအားဖြင့်ပေးချေရန်သို့မဟုတ်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့ကအနည်းဆုံး 10 နှစ် '' အမျိုးသားရေးအာမခံပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့လိုပါလိမ့်မယ်တောင်းခံနိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်ပုံမှန်ငွေပေးချေမှုဖြစ်ပါသည် ။ သငျသညျအလုံအလောက်ပံ့ပိုးမှုများတို့ကိုလုပ်ကြပြီမဟုတ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ပင်စင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဘူးဆိုရငျ, သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့သို့မဟုတ်အရပ်ဘက်မိတ်ဖက်အမျိုးသားအာမခံပံ့ပိုးမှုများမှတဆင့်တစ်ဦး '' ထိပ်တန်းကိုတက် '' ပြည်နယ်ပင်စင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေနိုင်သည်။
တယ်လီဖုန်း: 0800 731 7898
သငျသညျကိုငှားပြီးအနိမ့်ဝင်ငွေပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအိမ်ရာအကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်မည်အကြောင်း။ သင်အလုပ်လက်မဲ့သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ရှိမရှိအိမ်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဘယ်လောက်သင်ရသင့်ဝင်ငွေအပေါ်အခြေခံသည်။
သင့်ရဲ့အိမ်ရာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုသင်ကောင်စီသို့မဟုတ်လူမှုရေးအိမ်ယာအတွက်အသက်ရှင်လျှင်လျှော့ချကာအားလပ်ချိန်မှာအိပ်ခန်းရှိနိုငျသညျ။ အဆိုပါလျှော့ချရေးတစျခုအားလပ်ချိန်မှာအိပ်ခန်းနှင့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအားလပ်ချိန်မှာအိပ်ခန်းအဘို့ 25% အဘို့သင့်အိမ်ရာအကျိုးကျေးဇူး 14% ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်စီအခွန်လျှော့ချရေးသင့်ကောင်စီအခွန်ပေးဆောင်စေရန်ကူညီပေးသည်သောနည်းလမ်းများ-စမ်းသပ်ပြီးအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီပါကသင်၏ကောင်စီအခွန်ဥပဒေကြမ်းအထိကို 100% အထိလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးအနိမ့်ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ပြောဆိုချက်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါ်နေလျှင်သင်ရထိုက်ခွင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ငှားပိုင်ဆိုင်လျှင်သင်, လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အလုပ်လက်မဲ့သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
သငျသညျအသကျရှငျအဘယ်မှာရှိ - တစ်ဦးချင်းစီကောင်စီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ပြေး။
သင့်ရဲ့အခွအေန (ဥပမာဝင်ငွေ, သားသမီးများ၏အရေအတွက်, အကြိုးခံစားခှငျ့, နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းကို) ။
သင့်အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေ - ဤငွေစု, ပင်စင်လစာနှင့်သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ဝင်ငွေပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကဆောင်းရာသီဆီငွေပေးချေမှု£ 100- သင်သည်သင်၏အပူကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ကူညီရန်နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလများအကြားနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအလိုအလြောကျ paid £ 300 ၏အခွန်လွတ်ပေးချေမှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဤငွေပေးချေမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်မေလ 1953 ရက်နေ့တွင်သို့မဟုတ်5မတိုင်မီမွေးဖွားခဲ့ကြရပေမည်။
သင်တစ်ဦးဆောင်းရာသီဆီငွေပေးချေလက်ခံရရှိဖူးဘူးဆိုလျှင်, မဆိုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုရရှိသို့မဟုတ်မှသာအိမ်ရာအကျိုးခံစားခွင့်, ကောင်စီအခွန်လျှော့ချရေးသို့မဟုတ်ကလေးအကျိုးခံစားခွင့်မခံမယူကြဘူး, သင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိရန်လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရှေ့တျော၌ဆောင်းရာသီဆီငွေပေးချေမှုရမည့်ရရှိထားသို့မဟုတ်သင်မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်သို့မဟုတ်တစ်ပြည်နယ်ပင်စင်ခံယူလျှင်, သင်ကအလိုအလျှောက်ကိုသင်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောဆောင်းရာသီဆီငွေပေးချေဘို့လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။
တယ်လီဖုန်း: 03459 15 15 15
ပူနွေးသောမူလစာမျက်နှာလျှော့အစီအစဉ်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ပေးချေသင့်ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလျှပ်စစ်မီးဥပဒေကြမ်းအပေါ်တစ်ဦးတည်းကိုချွတ်လျှော့စျေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အစီအစဉ်လျှပ်စစ်မီးပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူပြေးသည်ကိုဒါသင်သည်သင်၏လျှပ်စစ်မီးပံ့ပိုးပေးနှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျထိုနှစ်တွင်ရဲ့လျှော့စျေးများအတွက်ခြေစစ်ပွဲရက်စွဲပေါ်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီစံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလျှင်ဒီလျှော့စျေးသင့်ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလျှပ်စစ်မီးဥပဒေကြမ်းကိုချွတ်ယူလိမ့်မည်။
သငျသညျ (သင်အဖြစ်ကောင်းစွာချွေတာသုံးစွဲခရက်ဒစ်ရပင်လျှင်) ပင်စင်ခရက်ဒစ်၏အာမခံအကြွေးဒြပ်စင်ကိုလက်ခံရရှိထားရပါမည်။
တယ်လီဖုန်း: 0345 603 9439
သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာပျမ်းမျှအပူချိန် 1 နိုဝင်ဘာလ 31 မတ်လအကြားခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတဲ့ကာလတစ်အချို့အပူချိန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျရောက်လာသောအခါအေးမိုးလေဝသငွေချေမှုအလိုအလျှောက်ရထိုက်ခွင့်ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေပေးဆောင်နေကြပါတယ်။
သငျသညျတစျဦးကိုအောက်ပါဝင်ငွေ-related အကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိထားရပါမည်, ဤငွေပေးချေမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ရန်:
ဝင်ငွေခွန်ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ်ဝင်ငွေခွန်-based အလုပ်ရှာသူများရဲ့ခွင့်ပြုသငျသညျ 60 သို့မဟုတ်ကျော်အသက်ကြောင့်။
ဝင်ငွေခွန်ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ်ဝင်ငွေခွန်-based အလုပ်အကိုင်နှင့်ပံ့ပိုးမှုခွင့်ပြုပါ (ESA) နှင့်ငါးသို့မဟုတ်တစ်မသန်စွမ်းကလေးအတှကျတာဝနျရှိသညျအောကျကလေးတစ်ဦးရှိသည်။
ပင်စင် Credit ။
universal Credit ။
ပြန်ကြားရေး additional သတင်းရပ်ကွက်များ
သင့်ဒေသခံနိုင်ငံသားများအကြံဉာဏ်ဗျူရိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကူအညီကောင်းတစ်ခုအရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျအကွံဉာဏျလူတစ်ဦးအတွက်သင့်ဒေသခံနိုင်ငံသားများအကြံဉာဏ်ဗျူရို (cab) သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဒေသခံ cab ကိုရှာဖွေဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်သို့မဟုတ်သင့်ဧရိယာများအတွက်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်ပါ။
တနည်းအားဖြင့်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုသို့မဟုတ်သင့်မိသားစုဆရာဝန်ကျွမ်းကျင်သူများကရန်သင့်ကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း, မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဗြိတိန်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအကျိုးကျေးဇူးများကိုများစွာသောရှုထောင့်အပေါ်လွတ်လပ်သောနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်းအစိုးရရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဂဏန်းတွက်စက်ကိုကြည့်ဖို့လိုပေမည်။ သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့သငျ့ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ SarcoidosisUK ရဲ့ထောက်ခံမှုကွန်ယက်ကိုစူးစမ်းဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
ကံမကောင်းစွာပဲ SarcoidosisUK တစ်ဦးချင်းစီမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်သလိုကျနော်တို့အကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကွံဉာဏျပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ငယ်တစ်ခုမေတ္တာဖြစ်ကြပြီးကံမကောင်းဤအချိန်မှာအရင်းအမြစ်များကိုမရှိကြပါဘူး။
အမျိုးသားဖုန်းဝန်ဆောင်မှု (အင်္ဂလန်): 03444 111 444
အမျိုးသားဖုန်းဝန်ဆောင်မှု (ဝေလနယ်): 03444 77 20 20
အမျိုးသားဖုန်းဝန်ဆောင်မှု (TextRelay): 03444 111 445
ပါလီမန်နှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု Ombudsman: www.ombudsman.org.uk/
မသန်စွမ်းအခွင့်အရေးကိုဗြိတိန်ပြန်ကြားရေး Factsheets: www.disabilityrightsuk.org/how-we-can-help/benefits-information/factsheets/factsheets-alphabetical-order
ESA DLA / PIP သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပံ့ပိုးမှုရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ (SarcoidosisUK နှင့်အတူ unassociated)